Ukujonga kwimiqolo yemidlalo yebhodi kwirakhi yomdlalo, ngaba uyawukhumbula umdlalo onesembozo esithandekayo kumbono wokuqala? Okanye umdlalo omatshini wawo uyonwabisa, kodwa ujongeka woyika kancinci. Ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, isiciko somdlalo simisela ukuba umdlalo ulungile okanye awulunganga. Ngokuphuculwa kwabantu '...
Inkqubo yokuKhula kweQela lamantombazana eMidlalo yeBhodi yaseKorea
Umzi-mveliso wezithixo ukhule ngokwaneleyo eSouth Korea. Njengoko isitsho njalo, iKorea inobuncwane abathathu: isithixo, ukuthenga, ukutya. Izithixo ezibukeka zintle ziyafana, kodwa zimbalwa izithixo ezinomdla. Kutshanje, kwishishini loyilo lwegraphic lolutsha lwaseMzantsi Korea, ...
Umbono wokudibana komenzi webhodi yomdlalo webhodi
I-Kylin manufactory ngumvelisi oqeqeshiweyo kunye nokuthumela ngaphandle kumdlalo webhodi. Umbono wethu kukuba: 2. Ukuzinikela ekuphuculeni inkqubo yemveliso ...
Ukudlala okushicilelweyo okuqhelekileyo, Idayisi yesiNtu, Amalaphu Umdlalo weBhodi, Amakhadi okuQinisekiswa kuMgcini weenkuni, Amakhadi okudlala aqhelekileyo, Ikhadi lemikhono,